ईन्डियन प्रिमियर लिग : दिल्ली क्वालिफायरमा छनोट, हैदराबाद आउट ! « Nepal Bahas
ईन्डियन प्रिमियर लिग : दिल्ली क्वालिफायरमा छनोट, हैदराबाद आउट !
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७६, बिहीबार ०७:२५
एजेन्सी । दिल्ली क्यापिटल्स ईन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट ‘आइपीएल’को क्वालिफायरमा छनोट भएको छ । इलिमिनेटर खेलमा सनराइजर्स हैदराबादको चुनौती पार गर्दै २ विकेटले पार गर्दै दिल्लीले क्वालिफायरमा चेन्नेई सुपर किंग्ससंगको भिडन्त पक्का गरेको हो ।
१ सय ६३ रनको मध्यम लक्ष्य दिल्लीले अन्तिम ओभरमा ७ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो । ओपनर पृथ्वी शाले ५६ रनको अर्धशतकिय इनिङ्स खेल्दै दिल्लीको जितको रेखा कोरे । शाले ३८ बलमा ६ चौका र २ छक्काको मदलते सो स्कोर खडा गरेका थिए । ऋषभ पन्त अर्धशतक बनाउन १ रनले चुके ।
शिखर धवन १७ रनमा आउट भएको खेलमा श्रेयश लेयर ८ रनमा पोविलियन फर्किए । हैदराबादका खलील अहेमद र रसिद खानले समान २-२ विकेट लिए । यसअघि दिल्लीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको हैदराबादले निर्धारित ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ६२ रन बनाएको थियो ।
मार्टिन गुप्टिलले बनाएको ३६ रन टोलीको सर्वाधिक स्कोर रह्यो । मनिष पाण्डेले ३० र कप्तान केन विलियम्सले २८ रन बनाए । विजय शंकरको नाममा २५ रन रह्यो ।
दिल्लीका इशान्त शर्माको नाममा सर्वाधिक २ विकेट रह्यो । विजेता दिल्लीले फाईनल प्रवेशका लागि चेन्नेई सुपर किंग्ससंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पराजित हैदराबाद प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । पहिलो क्वालिफायर खेलमा जित निकाल्दै मुम्बई ईन्डियन्स प्रतियोगिताको फाईनल प्रवेश गरिसकेको छ ।